Madaxweynaha Soomaaliya oo mar kale ku celiyey madax-banaanida garsoorka Soomaaliya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Madaxweynaha Soomaaliya oo mar kale ku celiyey madax-banaanida garsoorka Soomaaliya
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud oo maalintii afaraad booqasho ku jooga dalka Ingriiska ayaa sheegay in garsoorka iyo caddaaladda Soomaaliya ay madaxbanaan tahay isla markaana aysan cidna faro gashan karin.
Madaxweynaha oo waraysiyo kala duwan siiyey Warbaahinada BBC iyo Aljazeera ayaa la weydiiyey Kiiska gabadha sheegtey in la kufsadey ee xiran iyo weriyaha loo haysto in uu waraystey, sidoo kale waxaa Madaxweynaha wax laga weydiiyey wel-welka ururada xuquuqda aadanuhu ka muujiyeen arrintan.
Madaxweynaha ayaa sheegey in Dowladdiisu ay tahay tan keliya ee xaqiijisey booska haweenka, waxa uu hoosta ka xariiqey in aanu si toos ah u faro gashan karin kiis Maxkmadda ka docda.
Dacwadda haweenay 27 jir ah, ninkeedi, iyo weriye madaxbanaan kuwaas oo lagu eedeeeyay in ay sameeyeen been abuur iyo sharaf dhac ay u geysteen ciidanka Soomaaliya, si ay u helaan xoogaa faa’iido ah, ayaa soo jiitey dareenka hay’adaha isha ku haya Kufsiga iyo galmada khasabka ah iyo weliba hay’adaha u dooda xuquuqda suxufiyiinta.
Madaxweyne Xassan Shiikh Maxamuud ayaa sheegay in sida dalkasta caddaaladiisu u madax banaan tahay Soomaaliyana ay u madaxbanaan tahay caqabado badanba ha haysteen Caddaaladda Soomaaliya laakiin waxa uu meesha ka saarey in uu wax faro gelin ah ku samaynayo.
Madaxweynaha oo waraysi kale siinayey BBC ayaa la weydiiyey in dowladiisu dooneyso in ay xoog ku muquuniso oo keliya al-Shabaab iyo in ay wada hadal la geli karaan, Xassan ayaa sheegay in ay muhim tahay in awood loo sheegto al-Shabaab laguna muquuniyo laakiin haddii ay mowqifkooda ka waantoobayaan ay la hadlayaan, isla amrkaana dalka ay isaga baxaan ajaanibta u so dagaal doontey.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey wel-welka uu ka qabo in ay soo noqdaan Hoggaamiye kooxeedyadii Soomaalida isla markaana ay ridaan xukuumadiisa, waxaase uu sheegey taas in aysan wax wel-wel ah ka qabin oo ay haystaan kalsoonida shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa ku sugan dalka Ingriiska maalintii afaraad waxaana uu sugayaa kulanka raysalwasaaraha Ingriiska David Cameron oo safaro ku marayey dalalka Waqooyiga Afrika, sidoo kale wada hadal u furaaya maanta dalalka Pakistan iyo Afqaanistaan.
Maanta (isniin) waxaa Madaxweynuhu khudbad ka jeedin doona Aqalka Cilmibaarista iyo Diraasaadka Arrimaha Caalamka ee Chatham House, waxaana fadhigaas ka qaybgeli doonaa cilmibaarayaal, kuwa daneeya arrimaha Soomaaliya iyo saxaafadda iyada oo su’aalo toos ah la weydiin doono.
Dhanka kale waxaa jira dad is abaabulaya kuwaas oo doonaya in ay ku banaanbaxaan Aqalka Chatham House-ka banaankiisa, iyaga oo ka ashtakoonaya in Madaxweynuhu la soo baxay ku dhaqanka caddaalad darro iyo eex, waa sida ay ku eedaynayaane.